what is the difference between ubuntu and kubuntu — MYSTERY ZILLION
what is the difference between ubuntu and kubuntu
February 2008 edited February 2008 in Ubuntu
hello how u think difference ubuntu and kubuntu...
i think that is just only GUI isn't it???
ubuntu is running in gnome
kubuntu is running in kde....
I just know about it...can i get further knowledge of it??like what is gnome and what is kde or blah blah..
တစ်ခုပြောရရင်တော့ ကျနော် မြန်မာစာဖွန့်နဲ့ ရေးထားတဲ့ ပရိုဂရမ်တွေ Gnome မှာ သိပ်အလုပ် မလုပ်ဘူးဗျ။ စာလုံးတွေ ကောင်းကောင်းမပေါ်ဘူး။ အသတ်တွေ သဝေထိုးတွေပြဿနာရှိတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ gnome ပဲ.. ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ရှင်းလို့.. နောက်ပြီးသုံးရတာ လွယ်တယ်... KDE ကတော့ လန်ထွက်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် သိပ်ပြီးမကြိုက်တာသေချာပါ့.. မျက်စိနောက်လို့ဗျ... :P gnome မှာတော့ မြန်မာစာတွေ ကောင်းကောင်းလုပ်တယ်ဗျ..
အဲ။ ဖိုင်းယားဖောက်စ်စတဲ့ ဘရောက်ဇာတွေအပေါ်မှာတော့ မြန်မာစာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကိုယ်ပိုင် application ရေးလို့ textbox တွေ richtextbox တွေသုံးရင် ကောင်းကောင်းအလုပ် မလုပ်တာပါ။
တကယ်တော့ ကျနော်လဲ gnome ပဲပုံမှန်သုံးတာပါ။ graphics တွေသိပ်ကြည့်မရပါဘူး။